A tọhapụrụ beta ụdị Fedora 34 na ndị a bụ akụkọ ya | Site na Linux
Daysbọchị ole na ole gara aga Fedora 34 Beta weputara (ụdị ngosi nke Fedora ọzọ) na jiri GNOME 40 dị ka ebe desktọọpụ ndabara na nke akara kefriza nke niile mgbanwe ga-esịne ke ufọk ufene version.
GNOME 40 dị iche site na onye na-ahọpụta ihe na-arụ ọrụ nke na-achọ ime ka ergonomics ka ukwuu na gburugburu ebe ọrụ na-adabere n'ụzọ dị ukwuu na ihu ihu na mbadamba nkume.
Kedu ihe ọhụrụ na Fedora 34 Beta?
Versiondị Fedora ọhụrụ na-eji desktọọpụ GNOME 40 ọhụrụ, nke na-eweta mmelite na ahụmịhe onye ọrụ Na nkọwapụta nke mkpokọta GNOME, nkwalite ya hazigharịrị atụmatụ dịka ọchụchọ, windo, ebe ọrụ, na ngwa iji mee ka ha nwekwuo ohere. GNOME 40 na-agụnye ndozi na-ejizi otutu monitors ma na-enye ndị ọrụ ohere ịhọrọ n'etiti oghere ọrụ naanị na ntanetị ma ọ bụ ebe ọrụ ha na ntanetị niile.
Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịchọta Btrfs dị ka faịlụ ndabara faịlụ nke gụnyere na Fedora 33 ma a ga-ahụkwa ya na ụdị Fedora 34 Beta ọhụrụ a na nke ahụ bụ Btrfs na-ewuli elu na ọrụ a site na ikwe ka mkpakọ transperent maka ohere nchekwa. Ezubere nke a iji nyere aka bulie ndụ nke mgbasa ozi nke ukwuu, n'ihi na mkpakọ a ga-adị oke mkpa n'ịbawanye ọgụgụ na ide arụmọrụ nke faịlụ buru ibu, na-enwe ike itinye oge dị oke mkpa na arụmọrụ.
Kedu ihe nke a Pụtara bụ mkpakọ ka mma na steeti draịva siri ike, nke n'aka nke ya kwesiri ime ka ndu nchekwa nke nchekwa bawanye. Ebe ọ bụ na SSDs anaghị adị ogologo ndụ, a na-enwe obi iru ala n'ịkwụ ụgwọ. Nwelite Btrfs kwesịkwara ime ka SSD gụọ ma dee ọsọ ọsọ.
Mgbanwe ọzọ e gosipụtara bụ ngwa ahụ PulseAudio nọchiri PipeWire maka ịgwakọta na ijikwa iyi egwu, na-adịghị ala dị ala maka ndị ọrụ ọkachamara dịka ọ ka mma iji mezuo mkpa nke arịa na ngwa ndị na-ebufe na Flatpaks, mgbanwe a na-akwado ngbanwe IT na-eto eto na ụwa nke ejiri ya.
Ntugharị na PipeWire na-emekwa ohere maka otu akụrụngwa ọdịyo nke nwere ike izute ma nke onwe ma ndị ọkachamara na-eji okwu eme ihe, na-achọ ịkwụsị mpempe nke ọdịyo ọdịyo. Dị ka ndị na-ahụ maka ọrụ Fedora si kwuo, ọrụ Fedora na-ezube ịgbatị ahụmịhe onye ọrụ na nhazi nke akụrụngwa ọdịyo na ijikọ mma na sistemụ niile.
Ọzọkwa, ọ na-kwuru na Fedora 34 Beta na-enye ahụmịhe ka mma n'ọnọdụ ọnọdụ nchekwa dị ala (OOM) site na itinye systemd-oomd na ndabara. Omume systemd-oomd mere na ọkwa otu, na-ejikọ nke ọma na ndụ ndụ nke usoro sistemụ.
N'aka nke ọzọ, ọzọ atụmatụ Ihe kachasị adọrọ mmasị bụ nke dị na Wayland eserese eserese bụ nkwado ngosipụta nke na-eme ka o kwe omume maka igwe ojii na-agba ọsọ na desktọọpụ nke enwere ike ịnweta ya, naabụghị nke ahụ, Wayland nwetakwara nkwado maka eserese 3D eserese na Nvidia GPUs. nakwa a gbanwere mgbanwe nnọkọ ndabara na SDDM iji họrọ nnọkọ KDE Plasma Desktop nke Wayland dabere na nke dabeere na X11.
N'ikpeazụ, a na-anụ Fedora 34 ka ọ nwee nkwado nkwado touchpad ka mma, n'agbanyeghị na ọ bụ na ndabara. ogwe aka ga-agụnye nkwado maka ntanetị na mkpịsị aka na mkpịsị aka.
N'ikpeazụ, ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya Banyere mgbanwe niile metụtara ụdị beta a nke Fedora 34, ị nwere ike ịlele nkọwa niile site na ịga na-eso njikọ.
Ozugbo ozugbo nye ndị nwere mmasị ibudata ma nwalee ụdị beta, nwere ike nweta ihe oyiyi sistemụ site na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Hasdị beta nke Fedora 34 ewepụtala ma ndị a bụ akụkọ ya
RetroShare: ikpo okwu izipu ozi nzuzo